Maxaad Ka Taqaanaa Qaababka Wanaagsan Ee Loo Tacbado Qaraha (Sawiro) - iftineducation.com
Maxaad Ka Taqaanaa Qaababka Wanaagsan Ee Loo Tacbado Qaraha (Sawiro)
iftineducation.com – Beerashada Qaraha oo ka mid ah dalagyada Soomaalida tacbato wuxuu u baahan yahay farsamooyin sare loogu qaadaayo tayadiisa maadaama uu geedka Qaraha uu ka mid yahay geedaha saaqo.
Geed miroodyada saaqo sida Qaraha waxaa dhibaato gaarsiiyo saanta dadka dhex soconaayo oo naafeeyo waxsoosaarka geedaha noocaas ah. Sidaasi darteed qofka beeraleyda ah ee Qaraha beerto wuxuu inta badan maciinsadaa inuu Ood ku wareejiyo beerta uu ku tacbanaayo Qaraha si aan dadka ugu joogsanin farqaha carganka ah ee kobcaayo.
Khubarada cilmiga Agricultural Engineerin-ka ayaa soo hindisay qaabab fiican oo loo tacbado Qaraha, qaabkan cusub ayaa ah mid looga faa’ideysan karo labo arimood:
1- Inaad Qare badan ka soo saarto dhul yar oo kooban iyo
2- Inaad ka nabadgasho dadka socotada ah ee kaaga joogsanaayo farqaha geedka Qaraha .
Sida sawirada hoose ka muuqato, Qaraha waxaad xataa ku tacban kartaa Gurigaaga adiga oo saaqiisa u weecinaayo darbiyada ama guriga dushiisa.
Maxaad Ka Taqaanaa Qaababka Wanaagsan ee dumarka istiinkooda loo kiciyo
in ninka gabadha asagoo taataabanin galmada bilaabo